We Fight We Win. -- " More than Media ": နိင်ငံတကာသတင်းစာ များ က ဒေါ်စုကို ဝေဖန် လာခြင်း
နိင်ငံတကာသတင်းစာ များ က ဒေါ်စုကို ဝေဖန် လာခြင်း
သတင်း စာတွေက ဤသို.မြင်သည်။
ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာထွက် ပြီးသည်.နောက် တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေက သူမကို အလွန်ဒေါသထွက်စိတ်ဆိုးနေတဲ.အရှိန် ထိုးတက်လာခဲ.တာ မြန်မာ.ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်စု ခု သိသွားပါပြီ။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း မှာ ဆန္ဒပြသူတွေကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ.၀င်တွေက မီးသတ်ကားရေပန်းတွေ မီးလောင်ဗုံးတွေ သုံးပြီး အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ.အပြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြီးမှုးတဲ. ကော်မရှင် တစ်ရပ်ကို ဖွဲ.ခဲ.တာဖြစ်ပါတယ်။